पछिल्लो समय ठाक्क ठुक्क बोलको गीत गाएर चर्चामा रहेका छन् गायक गौरवनारायण राई । आजभन्दा करिब ३ बर्ष अगाडी रोजगारीको शिलशिलामा मलेसिया पुगेका गौरव पाख्रिबास नगरपालिका वडा नम्बर ७ निवासी हुन् । गायक गौरवनारायण राई संग हाम्रा मलेसिया प्रतिनिधि किशोर पुमा राईले गरेको कुराकानी ।
हिजोआज के मा ब्यास्त हुनुहुन्छ ?
यस्तै कम्पनिको ड्युटी अनि गीत-संगीतमै समय बितीरहेको छ ।
तपाइको पहिलो गीत कुन हो ?
मेरो पहिलो गीत स्वदेसगान हो ” झुकाएर झुक्दैन हाम्रो स्वाभिमानलाइ ” बोलको गीत नै मेरो पहिलो पटक रेकर्ड भएको गीत हो ।
यो गीत कहिले रेकर्ड भएको हो ?
यो गीत २०६३ सालमा रेकर्ड भएको हो ।
गायन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको कति बर्ष भयो ? र कतिवटा गीतहरु रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ तपाईले ?
लगभग एक दशक पार हुदैछ सर । हाल सम्म ७ वटा गित रेकर्ड भएको छ, अरु गीतहरु आउने तयारीमा पनि छन् ।
तपाइको सोलो एल्बमहरु?
सोलो एल्बमको तयारीमा छु सबै गीतहरु तयार छन् रेकर्ड गर्न मात्र बाँकी छ ।
एल्बमको नाम जुराइसक्नुभयो?
हजुर ” सफलताको शिखर ”
आउने सोलो एल्बममा कस्ता कस्ता गीतहरु समाबेश गर्दै हुनुहुन्छ?
सबै खाले अटाउने कोसिस गरेको छु सर लोकपप , आधुनिक ,डान्सिङ अनि स्वदेसगान पनि छ।
तपाईं आफै गीत पनि लेख्नुहुन्छ कि?
लेख्छु” झुकाएर झुक्दैन” मेरो पहिलो गीत मैले आफैले लेखेको हो ?
कस्को प्रेरणाले यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो ?
मेरो बुवाको प्रेरणाले हो, उहाँ पनि गाउनुहुन्थ्यो मादल बजाउनुहुन्थ्यो ।
तपाइको बुवा पनि संगीत क्षेत्रमै हुनुहुन्छ की ?
हुनुहुन्न, उहाँको सोख थियो त्यो सोख पूरा गर्नलाई पनि म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ ।
कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
रमाइलो छ सर, गीत संगीतको माध्यम बाट दर्शक श्रोताहरुको मनमा बस्न पाइरहेको छु ।
नेपाली संगीतको क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?
एल्बम / सिडि बिक्री त हुदैन, तर दर्शक श्रोताहरुको माझमा पुग्नलाई धेरै समय लाग्दैन विभिन्न सोसियल मिडियाहरुको कारणले पनि । पहिले भन्दा अहिले कन्सर्ट विभिन्न कार्यक्रमहरु भैरहन्छ राम्रै छ तर प्रतिस्पर्धा धेरै छ भविष्य राम्रो देख्छु तर यो क्षेत्रमा आउनेहरुमा संगीतलाई बुझ्ने ज्ञान चेतना चाहिँ हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय संगीत क्षेत्रमा केही बिकृती मौलाइरहेको छ भन्ने आरोप बारे के भन्नू चाहानुहुन्छ?
यसमा मेरो भन्नु केही छैन, राम्रो कुरो टिक्छ नराम्रो कुरो फिल्टर भएर जान्छ ।
पारिवारिक साथ सहयोग बिना अघि बढ्न सकिन्दैन भनिन्छ तपाइलाइ चाहिँ पारिवारिक सहयोग कतिको छ ?
पारिवारिक सहयोग एकदम पाएको छु सर सबैले हौसला दिनुहुन्छ?
तपाइको परिवारमा अरुपनि संगीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कि?
कम्पनिको कामले तपाइको गायन यात्रालाइ असर पारेको छ जस्तो लाग्दैन?
छ नि सर लाग्छ नि ।
समय कसरी मिलाइरहनु भएको छ त ?
यसरी नै सर कम्पनिको ड्युटीबाट बचेको समय अनि बिदाको दिन गीत-संगीतलाई समय दिन्छु।
गीत-संगीत बाहेक तपाइको अन्य रुचिहरु ?
डान्स गर्छु कहिलेकाही अनि ब्याडमिन्टन खेल्नु मनपर्छ ।
भविष्यमा तपाइलाई म्युजिक भिडियोहरुमा डान्सरको रुपमा दर्शक श्रोताहरुले देख्न पाउछन् त ?
त्यसबारे अहिले सम्म सोचेको छुइन डान्स म शारिरिक ब्यायाम स्वरुप गर्छु ।
बिदेसमा बसेर नेपाली गीत-संगीतको लागि योगदान लगानी गरिरहनु भएको छ तपाइलाइ बिदेस बसेर नेपाली गीत-संगीतको काम गर्नु कतिको अफ्ठ्यारो छ ?
अहिले सन्सारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि आफुले चाहेको काम गर्न गाह्रो छैन
मेरो योजनाहरु सधै नै दर्शक श्रोताहरुलाई राम्रो राम्रो चेतनामुलक गीतहरु दिने र नेपाली गित सङ्गितलाइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने कोसिस हुनेछ यसैमा लागिपरिरहने छु ।
आगामी दिनहरुमा पनि तपाइको सांगीतिक यात्रा निरन्तर अघि बढिरहोस शुभकामना साथै ब्यस्तताको बाबजुद समय दिनुभएकोमा धन्यवाद अन्त्यमा तपाइको दर्शक श्रोताहरुलाइ के भन्न चाहानुहुन्छ?
धन्यवाद यहाँलाई मलाइ यो अवसर दिनुभएकोमा अन्त्यमा सधै यसरी नै तपाइहरुको माया साथको अपेक्षा राख्दछु सम्पुर्ण दर्शक श्रोताहरुलाइ नेपाली गीत संगीत नेपाली कलाकारलाइ यसरी नै माया गरिरहनुहोस् भन्न चाहान्छु ।